I-Dongxing City Courtyard B&B Nordic amagumbi okulala amathathu angapheka eduze kwaseJintan - I-Airbnb
I-Dongxing City Courtyard B&B Nordic amagumbi okulala amathathu angapheka eduze kwaseJintan
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-小院
U-小院 unokuphawula okungu-52 kwezinye izindawo.
Amakamelo okulala amathathu namahholo amabili, angakwazi ukuhlalisa abantu abangu-7, afakwe ngokugcwele, aphathe izikhwama, ikhishi elihlakaniphile, akwazi ukupheka ukudla, ukuze uzwe ukufudumala kwekhaya phakathi nohambo!
Igumbi lelanga elinama-balcony aphindwe kabili abheke eningizimu, amafasitela asuka phansi kuya ophahleni, ungajabulela ukubuka kusuka ngaphambili nangemuva, futhi insimu yombono ibanzi. Izinsiza zasekhaya ezihlakaniphile, ukupheka okulula, izinto zokuhamba ezikahle, izindawo zokupaka zamahhala, umphakathi omkhulu, izakhiwo eziphelele, izinhlelo zokuqapha zifakwe yonke indawo, ukulawulwa kokufinyelela kweyunithi yekhadi, izingidi zeminyango yokungena, kulula futhi kuphephile ukungena. Kunezindawo eziphelele ezifana nezindawo zokuzijabulisa zabantu abadala, izinkundla zokudlala zezingane, nezindawo zokungcebeleka endaweni encane, ezifanele kakhulu imindeni enabadala nezingane.
Izinsiza ezizungezile ezisekelayo seziphelele: kunezindawo zokudlela ezikhethekile, ukudla okulula, amabhange, izimakethe zemifino, izitolo ezinkulu, amakhemisi kanye nolayini bamabhasi abahlukahlukene ohlangothini oluseningizimu lomphakathi ukuze bafinyelele ekungeneni komphakathi. Izindawo zentengiso phakathi kohambo lwemizuzu emi-5 zifaka inkundla kahulumeni kamasipala, indawo yokubhukuda, iRedwood City, izinkundla zamabhayisikobho, izinkundla zokudla, izimakethe zokudla kwasolwandle, izindawo zokudlela ezikhethekile, izitolo ezinkulu, amabhange, njll. Izindawo ezizungezile ezinhle yilezi: I-Vietnam Port, i-Red Rock Valley Rafting, i-Wanwei Golden Beach, i-Shimen Valley Scenic Area, i-Yijingyuan Water Park, njll., zonke eziseduze kakhulu. Kunamabhasi esangweni lomphakathi. Uma uhlala e-Dongxing, ungahamba uhambo losuku oluya e-Mong Cai, eVietnam, ungaphinde uye e-Wanwei Golden Beach, ungathatha isikebhe uyobamba izinkalankala, uye e-Shijiao mangroves ukuze ubone indawo, ungakwazi hamba Rafting, futhi kukhona izindawo zokuhlala eziningi ukudlala Oh 😄😄
Umnikazi wendawo uhlala kulo mphakathi, ungashayela noma i-WeChat nganoma yisiphi isikhathi uma unemibuzo, futhi ikunikeze izinsizakalo ezisezingeni eliphezulu amahora angama-24 ngosuku!